merolagani - एमएडब्ल्यु र गोल्छा ग्रुपले नेपाल ल्याउदै यी दुई मोटरसाइकल, कुन कस्तो ?
Nov 27, 2021 05:53 PM Merolagani
नेपालका लागि यामाहा मोटरसाइकलको आधिकारीक वितरक एमएडब्ल्यु इन्टरप्राइजेज र बजाज मोटरसाइकलको नेपालका लागि आधिकारीक वितरक गोल्छा ग्रुपले क्रमशः एफजेट एक्स १५० र बजाज पल्सर २५० सेग्मेन्टका मोटरसाइकल भित्र्याउने भएका हुन् । भारतीय बजारमा यी दुवै मोटरसाइकल केहि महिना अघि मात्रै सार्वजनिक भएका थिए ।
कस्तो छ यामाहा एफजेट एक्स १५० ?
यो मोटरसाइकल एफजेट एक्स भी ३ मा आधारित भएर डिजाइन गरिएको छ । खासगरी एफजेड एक्स मोटरसाइकलमा एलइडी हेड ल्याम्प,ब्लुटुथ कनेक्टिभिटी सिंगल च्यानल एबीएस , कन्भेन्सनल टेलिस्कोपिक फर्क र पछाडि मोनोशक सस्पेन्सन,दुबै चक्कामा डिस्क ब्रेक, फुल डिजिटल इन्ट्रुमेन्ट लगायतका फिचर उपलब्ध रहेको बताइएको छ ।
एफजेड एक्स मोटरसाइकलमा १४९ सीसी क्षमताको एफआई इन्जिन राखिएकाे छ जसले ७२५० आरपीएममा अधिकतम १२.४ पीएस पावर र ५५०० आरपीएममा १३.३ एनएम टर्क प्रदान गर्छ । यसमा ५ स्पीडको गियरबक्स रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
नेपाली बजारमा यो मोटरसाइलको मूल्य साढे तीन लाख माथिनै रहने अनुमान गरिएको छ ।
एमएडब्ल्युका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले भारतीय बजारमा नै एफजेट एक्सको डिमान्ड धेरै रहेकाले अन्य देशमा यो मोटरसाइलक विक्री खुल्ला गरि नसकेको बताए । ‘हामी नेपाली बजारमा यो मोटरसाइकल भित्र्याउन लागि परेका छौं’ उनले भने ‘ सम्भवत फागुन भित्रै ल्याउने तयारी छ’ ।
त्यस्तै बजाजले पनि पल्सर २५० नेपाली बजारमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । यो बाइकमा २४९.०७ सीसी सिङ्गल सिलिन्डर फोर स्ट्रक इन्जिन राखिएकाे छ । एफआई प्रविधिमा आधारीत पल्सर २५०मा राखिएको इन्जिनले ८७५० आरपीएममा २४.५ पीएस पावर जेनेरट गर्छ भने ६५०० आरपीएममा २१.५ एनएम पिक टर्क दिन्छ ।
५ स्पिड गिएर बक्स समेत दिइएको छ । गोल्छा ग्रुपका निर्देशक अभिमन्यु गोल्छाले ४ महिना भित्र नेपाली बजारमा पल्सर २५० नेपाल आइपुग्ने बताए । नेपाली बजारमा यो मोटरसाइकलको मूल्य साढे चारलाख माथिनै पर्ने अनुमान गरिएको छ ।